५ अर्ब ६३ करोडको १६ कम्पनीको आईपीओ आउँदै, हेर्नुहोस् कसको कति ? – OnlinePahar
५ अर्ब ६३ करोडको १६ कम्पनीको आईपीओ आउँदै, हेर्नुहोस् कसको कति ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:१० Basanta Khanal	0 Comments	IPO
विभिन्न १६ वटा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेका छन । ती कम्पनीहरुले ५ अर्ब ६३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ६३ लाख ५८ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन । १६ वटै कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन ।
रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले बोर्डबाट प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १२० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ । यी मध्ये अधिकाँश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाहरुलाई न्यूनतम १० कित्ता दिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाका कारण जलविद्युत कम्पनीहरुले धमधाम आईपीओ निष्कासन गरेका छन ।जलविद्युत बाहेक डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन । रकमका आधारमा मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
मध्य भोटेकोसीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५० लाख कित्ता निष्कासन गर्न लागेको छ । यस्तै साहस ऊर्जा लिमिटेडले पनि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता निष्कासन गर्न बोर्डमा पुगेको छ । यस्तै ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले साढे ६२ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज मिति २०७७ चैत १५ गते आइतवारको राशिफल पढौं
कोरोना बिर्सिएर बसन्तपुरमा होली (फोटो फिचर) →
लक डाउन खुकुलो भएसँगै, सेयर धितो राखेर ऋण लिनेहरु ह्वात्तै बढे
३ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर लिलामी किन्ने आज अन्तिम मौका
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:५५ Basanta Khanal	0
आज नेप्सेमा फेरि अर्को कीर्तिमान, १० कम्पनीकाे शेयरमा सकारात्मक सर्किट